Ngamunye the abazali ngayo yonke inhliziyo yami ufuna ingane yakhe eyigugu ukhule abantu banempilo futhi bajabule. Bese kuphela ezweni lethu lesimanje asizange kwenyukile ebuntwaneni engenazinkathazo futhi bejabule! Njengoba yasungulwa kakhulu kokuba eziningi izinzuzo, angabizwa ngokuthi lokuhamba ingane. Uma ukhetha ilungelo futhi ngesikhathi esifanayo ukwazi ukusebenzisa, umphumela okuzoba ukusetshenziswa kakhulu ngendlela ingane yakhe, futhi unina. Ukuhlela ingane yakho yokuzilibazisa, ungakwazi okungenani imizuzu embalwa ulala uphumule. Noma kunjalo, akufanele sikhohlwe ukuthi ngisho ingane walker abakwazi ukushiya ngaphandle ukunakwa isikhathi eside! Nakuba zonke umama onothando uyazi ngalokhu futhi ngaphandle izikhumbuzo. Indlela ukukhetha walker ingane, ngoba namuhla kukhona ezihlukahlukene zonke izinhlobo kanye abakhiqizi?
nenqubo ebalulekile Ukukhetha kumele kube: ukuzinza, izinga okuthembekile, isisindo kanye ukuphakama. Ubudala wengane ziyonquma imodeli. Ngokwesibonelo, izingane ezincane kakhulu abasakhonza ukufunda ukuhambisa imilenze, wenza walker esikhethekile ingane. Lolu hlobo iyafana uhlobo "ithoyizi" ngamasondo, okuyinto ingane yakho Kuyintokozo enkulu lizokhuphuka ngaphambi ngokwakho. Kufanele nakanjani ukulalelisisa isisindo sabo, yebo, ukuzinza kwengane kayiwanga nabo. Okuhle walker kufanele Okwaphawuleka for bawo. Ukuze konke lokhu ku-akhawunti futhi uthenge walker ezinhle zokuthi kungani izingane, kukhona omunye iseluleko efakazelwe nokunokwethenjelwa - test. Unganqikazi ukukhokha imizuzu embalwa nje ukuze uqinisekise ukuthi ukuzinza kanye ukuthembeka izinto uthenge. Ukuze wenze lokhu, ungatshekisa walker ndlela ezine ezihlukene. Qaphela futhi ukuthi isondo kumele akhiwe ngerabha noma okungenani kube iraba-camera. Inkampani ezinhle uyazinaka i ehilelekile ebaluleke kangaka, ngoba incike indlela amasondo phansi kuyoba phakathi ukubambelela okuhle. Enye inzuzo kulowo kuba walker izingane nge amasondo zenjoloba esikhundleni plastic isikhathi eside, ukugibela buyoba buhle futhi bube ngeke khenqeza. Ukuze emafulethini amancane, samuntu compact kuyoba kakhulu walker-abashushumbisi. Le modeli, okuyinto kunezelwa njengoba kudingeka, ukonga isikhala.
Zonke lezi zindlela ezibalulekile, njengokuthobeka, isibonelo, ngokuya zinesisindo esiphansi, okuhlangene ahamba zenzelwe, ebalulwe imiyalelo, okuyinto sabazali abakhathalelayo uhlolisise ukuthenga, hhayi ngemuva. Kukhona ezinye onobuhle lapho ungabona ebukhoneni amasondo kuze kube eyisishiyagalombili, esikhulu ububanzi! Letindlela ezidume ngokuba bengesibo ukuzinza kokuvamile bakhangwa maneuverability salo, esiwulwazi liwuhlukanise kusukela kweminye imihlobo. Hlobo luni walker ukunikeza okuthandayo, kuphuma kuwe. Namuhla ungathola amagama ahlukene abakhiqizi abaningi abadumile. Ngokwesibonelo, namuhla abaziwa ahamba abaningi "Chico", okuyinto, ngaphezu zonke izinzuzo ngenhla zisekhona engavamile esihlalweni ngokwanele ezijulile. Kuyinto elula kakhulu ngoba yakhelwe ukuze kuvikelwe ingane futhi ngikuvimbele ziwa walker. Indwangu esihlalweni obukhulu, ethambile, emnandi emzimbeni futhi, okubaluleke kakhulu, kungaphazamisi nokuhamba kwezindikimba imilenze, futhi inikeza load sekulinganisa, ukudala induduzo. Lokhu isihlalo buhlanganiswe emuva okusezingeni eliphezulu futhi Friend futhi base ezibanzi iqinisekisa ukuphepha umntwana kusukela ezihlukahlukene ukulimala, ngakho x buhlungu esifubeni noma isimo lapho ebhekana isithiyo, ezifana amathoyizi. Ngisho izolo, umntanakho ufunde mayelana nezwe nokudweba, futhi namuhla kungabonakala kuwo wonke ukwazi nge ukuphakama kwakhe siqu!
Uhlelo ngomdwebo: izinhlobo kanye nezici
Heater "Plaine": Abanikazi ukubuyekezwa, Ukucaciswa, ukufakwa ngezandla zabo